FAQs - Ningbo WEDAC Point of Display Sale Co., Ltd
Waxaan leeyahay oo kaliya sawirada qaar ka mid ah qaab ah, waxaad na siin kartaa oraah? Haddii aan, waxa kale waa in aad u baahan tahay?
Sorry aan ma laga yaabaa xigasho ku salaysan kaliya sawir, ugu yaraan waxaan u baahan nahay cabbirka ee qaab-dhismeedka, oo dhumucdiisuna iyo tayo kasta oo looga baahan yahay wax ka, tirada loo baahan yahay, tilmaanta ay u isticmaalka, iyo macluumaad ah ee wax soo saarka, kuwaas oo u baahan in la soo bandhigay.
Waxaan haystaa sawir ah, waxaa ku filan yahay?
Waayahay, laakiin fadlan calaamadee macluumaadka la xiriira sida faahfaahsan sida ugu macquulsan, oo cabbirka and explanation, thickness and quality requirements for the material, quantity required,the description for its usage, and the information of the product which need to be displayed.
Waxaan leeyahay design fikrad
Waayahay, laakiin fadlan ogow macluumaadka la xiriira sida faahfaahsan sida ugu macquulsan, cabbirka, dhumucda iyo shuruudaha tayada waxyaabaha la, tirada loo baahan yahay, tilmaanta ay u isticmaalka, iyo macluumaad ah ee wax soo saarka, kuwaas oo u baahan in la soo bandhigay
Waxaan haystaa sawirada
In uu noqon doono ugu wanaagsan, iyo haddii macluumaadka soo socda la heli karo, waxa ay noqon doontaa kaamil ah:
Shayga oo u baahan in la soo bandhigay
farshaxanka haddii ay jirto calaamad, insert graphic / warqad, decal ama daabacaadda waxaa laga codsadaa.
Tirada midabka Pantone daabaco silkscreen.
Maxay tahay in aan bixiyo haddii aan u baahdo bandhigay in la kartoo?
Fadlan soo socda haddii aad u baahan tahay unug bandhigay kartoo:
1. tiro The suurto gal ah in aad si hore.
2. A set dhamaystiran oo sawiro farsamo ahaan doonaa sida ugu wanaagsan noo oraah, wax soo saarka ama shuruudaha aad.
3. Haddii aadan haysan sawir farsamo, fikradda (design) sawir ka mid ah saamaynta adiga (ama xataa sawir a) la tirada xaaladaha halista ah iyo sharaxaad noqon doonaa shaqaynaya.
4. Faahfaahinta alaabta si aad u la soo bandhigay in unit bandhigay: Qaab, size, miisaanka, wax, sawir iwm, maxaa yeelay, waxaan u baahan nahay in la qorsheeyo / tijaabiyo bandhigay ku salaysan faahfaahinta badeecada, set ka buuxaan noocyo ka mid ah waxyaabaha loo baahan yahay si ay u tijaabiso unit bandhigay ka hor inta aan idiin dhiibo muunad final.
5. Haddii ay u baahan bandhigay si aad u la gelin on armaajo, fadlan noo soo gudbiyaan faahfaahinta shelf ah: Qaab, size, meesha godka kulanka, wax, sawir iwm
Waa maxay macluumaadka loo baahan yahay, waayo, oraah, iyo waxa macluumaadka aasaasiga ah loo baahan yahay waa in diyaar u noqon oraah?
1. Waxaan u baahanahay cabbirka ee qaab-dhismeedka kasta oo ka qayb kasta,
2. dhumucda iyo shuruudaha tayada waxyaabaha la,
4. deegaanka ku rakibidda iyo faahfaahinta
5. tirada loo baahan yahay,
6. Tilmaanta ay isticmaalka, iyo macluumaad ah ee wax soo saarka, kuwaas oo u baahan in la soo bandhigay.
7. faahfaahin xirxirida
8. farshaxanka haddii ay jirto calaamad, insert graphic / warqad, decal ama daabacaadda waxaa laga codsadaa.
9. Customer macluumaadka aasaasiga ah, la xiriir
dheer 10. Price
Sidee ugu dhakhsaha badan baan ka heli karaa qiimaha (oraah)?
1. sawiro Haddii faahfaahsan waxaa la siiyaa, ama macluumaad faahfaahsan oo ku jira oo dhan la heli karo oraah , sida caadiga ah aan siin kartaa qiimaha 2 maalmood gudahood, ku siin doonaa oraah si degdeg ah ama waqti dambe sida uu sheegay xaalada dhabta ah ee shaqada.
Waxyaabo badan ama waxyaabaha adkayn qaataan waqti yara dheer.
qiimaha aasaasiga ah (oo aan faahfaahin xirxirida, ama qiimo-shaqo hore) waxay noqon kartaa bixiyaha si degdeg ah.
Buuxi oraah (faahfaahinta xirxirida, miisaanka, waqtiga hogaanka tusaale iyo wax soo saarka iwm) waxay qaadan doontaa waqti yara dheer.
2. Macluumaadka ma dhamma, oraah la samayn karaa iyada oo aan sawiro, quote 3 maalmood gudahood.
3. Ma u baahan tahay in la sameeyo design ugu horeysay ka dibna sii oraah, sida caadiga ah waxay u baahan tahay 1 toddobaadkii in la siiyo oraahda . Ku siin doonaa oraah si degdeg ah ama waqti dambe sida uu sheegay xaalada dhabta ah ee shaqada.
Maxay yihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee aad soo saari kartaa?
bandhigay looxa, bandhigay taagan, golaha bandhigay, qaab la isku qurxiyo, maandooriyayaasha shelf, waxyaabaha PC, alaabta iwm PETG
Maxaa kale oo aad ku siin kartaa?
bandhigay caaga, waxyaabaha duritaanka, extrusion PVC, haystaha PVC, bandhigay alwaax, bir iwm bandhigay
Maxaa ka MOQ ee wax soo saarka WEDAC?
bandhigay looxa Clear: 100pcs
bandhigay looxa midabo: 500kgs
Sheet biraha bandhigay taagan: 100pcs
bandhigay caag duraa: 1000pcs
Waa maxay jidka xirxirida caadiga ah ee badeecada kala duwan?
1. xirxirida Guud: bac 1pc / PE / sanduuqa hoose, dhowr kumbiyuutarada / kartoonka, ama Dhowr kumbiyuutarada sanduuq hoose, ka dibna sanduuqyada N in kartoonka ah ..
2. xirxirida Jumlada: N kumbiyuutarada in kartoonka ah, iyadoo qaar ka mid ah infilling.
3. malabkii kartoonka, shaqabaq alwaax, kiisaska alwaax, gargaare xumbo, ugalay alwaax, ugalay caag iwm waayo doorasho.
Waa maxay fursadaha lacag bixinta ma WEDAC aqbalo?
WEDAC aqbalo bixinta soo socda:
1. T / T 50% ka hor sida deposit, iyo dheelitirka ka dib nuqul ka mid ah B / L.
2. LC arko
3. hab kale oo lacag in laga doodo oo la qiimeeyo sida xaaladda faahfaahsan.
waqti Lead tusaale iyo wax soo saarka mass: Sample 3-15 maalmood, wax soo saarka Mass 15-50 maalmood.
Taariikhda dhicitaanka of oraah: 30 Sida caadiga ah gudahood maalmood oo kaliya.
Muunad bixinta kharashka:
Qiimaha ≤10 dollars, free, laakiin lacag warqaadayaal waa ka masuul by iibsadaa noqon.
Qiimaha lacag> 10 doolar, kharashka Sample = qiimaha unit x 3 + warqaadayaal waa ka masuul by iibsadaa noqon.
Haddii sheyga u baahan tahay in la furo caaryada, qiimaha saamiga u baahan tahay inaad ka mid ah kharashka caaryada.
iibsadaha ayaa isticmaali kartaa T / T, paypal, ururka galbeed, Money Gram, & hab kasta oo loo sameeyo bixinta kharashka tijaabada.
Your qiimaha waa heer sare ah:
Haa, waxaa laga yaabaa in aannu qiimaha uu ka badan yahay dadka kale qaar ka mid ah, sababta oo ah waxaan marnaba ha adeegsan qalabka liita ama laga gooyay geesood oo soo baxay alaabta sub-caadiga ah, waxaan marna la yareeyo tayada shaqadeena si loo yareeyo kharashka soo saarka our, ma rabno in suuqa ee macaamiisha la waxyaabaha xun kharribaad, waxaan rajeyneynaa in our macmiilka oo na lagu wada faa'iday laga yaabaa inuu ka ganacsiga labada dhinac.
qiimaha aad soo xigtay waxaa ka wada xaajoon karaa ama la dhimay?
Haa, hubi, haddii qty., Ee Creech. ama marka la eego xaaladaha & iwm la hagaajin doonaa, ama is faham wadaaga ku filan u dhisan.
Maxaa ku saabsan saamiga ma ogol yahay?
Waxaan sixi doonaa, oo mar kale ku siin muunad cusub oo lacag la'aan ah.
Waxaan yeellay amar. Haddaba waa maxay?
Waxaan idiin soo gudbin doonaa xaaladda wax soo saarka la sawiro laga soo warshad ah. Waxaan raaci doonaa habka wax soo saarka iyo tayada wax soo saarka, hubi in wax walba yihiin heerka tayada aad, hubi in wax qalad ah ka hor inta alaabta ka tago our warshad ay jiraan! ...... .oo aad ka filan karto si aad u hesho alaabta ku amray ka dib markii wax soo saarka (sheegay in amarka) iyo waqtiga maraakiibta (by badda ama hawada).
waxaad noogu soo gudbin doonaa xaaladda-soo-saarka leh iyo sawiro ka dib markii si kaalinta?
Haa, hubi. Waxaan raaci doonaa habraaca ku-soo-saarka iyo aad ula socodsiisid.
Sidee baad u xakameeyo tayada badeecada?
Waxaan leenahay 3 QCs, waxay baadho wax kasta oo maalin walba, wax soo saarka kasta waa la baadhi doonaa marxalad muhiim ah, sida, wax xumu, semi-saarka, alaabta dhamaystirtay, Cabaynta iwm ..
Maxaa ku saabsan maraakiibta iyo gaadiidka? Ma leedahay wakiilka maraakiibta lagu kalsoonaan karo ama forwarder?
Haa waxaan leenahay wakiilka maraakiibta lagu kalsoonaan karo & forwarder nala shaqeeya oo sannado badan, waxay had iyo jeer ka samatabbixin kara alaabta dekadaha aad si ammaan ah.
Haddii aan FOB samayn, ha aad aqbasho qoondeeyey forwarder?
Haa, laakiin forwarder u baahan yihiin in la ansixiyey noo by sidoo kale ka hor inta aan ballan meel iyaga waxaa la jiray, haddii ay dhacdo forwarder leeyahay lacag aan macquul ahayn noo on ama aan ka helay dhibaatooyinka iyaga la, aan xaq u leedahay inaad codsato in la beddelo mid ka mid macquul ah, ama ku talinaynaa leeyihiin mid ka mid ah sida loogu talagalay adiga.
Maxaa ku saabsan waraaqaha maraakiibta?
Guud ahaan aanu ku siin doonaa qaansheegta, liiska iyo sharciga shixnadda sida waraaqaha maraakiibta xirxiraan, haddii iibsadaha u baahan tahay wax waraaqo kale, fadlan noo sheeg ka hor.
Ka dib markii la helo alaabtii, haddii dhaawac ama waxyaabaha haleysan waa la helay, waxa ay tahay in aan sameeyo?
Fadlan qaado sawiro iyo si degdeg ah noogu soo diraan, waxaan bedeli shixnaddaas soo socda.
Haddii aan meel si ku celis, qiimaha noqon kartaa wax ka yar ama la mid ah ku hayn sidii amarka ugu horeysay?
Waxaan dib u eegi doona qiimaha ku salaysan heerka sarrifka lacagta iyo qiimaha wax / shaqo ku dul qaata si ku celis ah, oo sixitaanka waafaqsan.
Ma waxaad tahay warshad / soo saaraha ama shirkad ganacsi ah?
Waxaan nahay saaraha laakiin waxaan sidoo kale u samayn karaa ganacsi haddii loo baahdo.
Imisa shaqaale ee guud ahaan in shirkadda?
Waxaa tahay 25 shaqaale ee warshadda.
Waa maxay awoodda wax soo saarka aad?
About USD500000 wax soo saarka bandhigay hadda, laakiin waxaan si dhaqso kordhin kartaa awoodda wax soo saarka our.
Maxaa hadda aad mugga iibka?
Malaayiin USD3 sanadkiiba.
Maxaad u dooratay bandhigay looxa?
1. Inta lagu jiro Adduunka Wall Ⅱ 1939-1945, sida plexiglass gaar ah, looxa ahaa marka hore si weyn loo isticmaalaa sida muraayda for diyaaradaha dagaalka iyo taangiyada, nolosha hawsheeda oo ahaa in ka badan 10 sano ka yar jawi aad u daran.
2. looxa waxa uu shahaadada sare ee daahfurnaanta, iyo heerka gudbinta iftiinka waa ilaa 92-93% --- ka badan hal galaas! Sidaa darteed waxa uu leeyahay sumcad ee "crystal caag ah".
3. Its iftiin jilicsan, raaxo, oo cajiib ah (sida diamond) muuqataa!
4. Waxa uu leeyahay iska caabin ah cimilada u fiican, epically dibadda, darajada ugu sareysa ee caagga ah. Waxqabadka wanaagsan in heerkulka sare, heerkulka dhalanrog ku dhawaad 96 ℃ ( 1.18MPa ) . Caabin Good cimilada, iska caabin acid iyo alkali, ma ifafaale of huruud iyo hydrolysis ka dib markii sano ee soo-gaadhista hoos qorax iyo roobka.
nolosha 5. waxqabadka Long: Marka la barbar dhigo qalabka kale (sida PS, AS, PP iwm), nolosha qaab saddex sano ka dheer!
6. Si heer anti-gaboobaya waxqabadka hawada: sampling tijaabo tijaabiyey in: ka dib markii 4 sano ah ee gabow dabiiciga ah, , miisaanka alaabta looxa ee ah, , xoojinta of taagay, oo transmittance iftiin hoos u yar ah, , midab jirsado yar hurdi ah, , iska caabin crazing yareeyo muuqata, Si kastaba ha ahaatee, qaab anti-saameyn kordhay meeshiisii, iyo qaab kale physic dhow isbeddel lahayn!
7. Waxa uu shahaadada sare qalbi engegnaantiinna aawadeed dusha iyo gloss,
8. Waxa uu qaab ciyaareed aad u fiican abuurtay & fiican, waxaa la aasaasay laga yaabaa by kulaylka, sidoo kale waxaa looga baaraandegi dhex machining farsamo.
9. looxa lagu dhigay karaa noocyo kala duwan oo qaabab iyo waxyaabaha loo baahan yahay. feature aad u fiican yahay inuu sii joogo heerka sare ee daahfurnaanta la degree sare oo dhumucdiisuna.
10. khafiif, cheapness, fududahay in la qaabeeyo.
11. wax ka looxa waxa uu shahaadada qabanin sare ee dhalaalka iyo sidoo kale faa'iidooyinka soo socda: qalleyf wanaagsan, ma si fudud u burburay; repairable; waxa ay leedahay dareen taabasho jilicsan, oo aan lahayn qabow yara ee xilliga qaboobaha. Waxay leedahay midabyo badan, kulan looga baahan yahay kala duwan. Products sameeyey looxa, ma aha oo kaliya fiican, laakiin sidoo kale endurable.
12. Degaanka saaxiibtinimo:
1) ay shucaaca waa la mid ah la lafaha dad ah ee.
2) wax qashinka dib loo isticmaali karo reuse, warshadaynta waa wax fudud oo ku habboon.
3) Heerka dib loo cusboneysiin karo Sare, la xoojiyo wacyiga deegaanka sii kordhaysa waa
la aqoonsan yahay.
4) No monomer halista ah ama urta la sii dayn doono.
5) badbaadada cuntada, oo innaba waxyeello ma in jirka aadanaha.
13. Energy badbaadinayo: degree Good gudbinta iftiinka, ilaa 92-93%, xoojinta iftiin yar
loo baahan yahay, yaraynta nalalka, keydinta xoog, tamarta iyo kharashka lagu badbaadinayo.
14. iska caabin ah saameyn xoog leh, toban jeer ka badan hal galaas caadiga ah, ku haboon loo xirxiro aaga ammaan ah baahiyaha gaarka ah.
15. waxqabadka ningax Good, ku haboon noocyo kala duwan oo qalab koronto.
16. miisaanka Light, miisaanka kala badh hal galaas oo caadi ah.
17. Midabada, shahaado sare oo dhalaalaysa, laga qabanin in qalabka kale.
18. plasticity Strong, wax taaj oo fudud.
19. Easy si ay u ilaaliyaan, si fudud loo nadiifin, biyaha roobka awoodo dabiici ah oo nadiif ah.
20. texture jilicsan, dareen aan si qabow sidii muraayad ama dhoobada ee xilliga qaboobaha.
21. Bright in midabka, la kulmi raacdada shakhsiga ah tayada nolosha.
22. qaab heer sare daabaco ama daahan, haddii la isticmaalo daabacaadda ku haboon ama ku xereen technology daahan, waxay ku siin karaan waxyaabaha looxa fiican saamayn decoration dusha & aragti.
23. dulqaadasho Good, oo la mid ah la aluminium, xasiloonida wanaagsan kiimikooyin, u adkaysan kara nabaad guurka ah walxaha kiimikada badan.
24. jar ilaalinta si nalalka gudaha, la kordhiyo nolosha adeeg ee nalalka.
25. Endurable dab, free huritaanka holac lama filaan iyo daminta is.
26. Waxaa tahay wax looxa taas oo uu leeyahay qaab kala duwan & badan, midabka kala duwan iyo saamaynta muuqaalka, la kulmi karaan shuruudaha kala duwan ee macaamiisha.
27. saamayn Aad iyo muuqaal ah ka dib markii processing habboon, decoration iyo daabacaadda.
Waa maxay farqiga u dhexeeya bandhig looxa iyo qalab kale? Looxa vs Glass
Looxa vs Glass
In warshadaha, wax looxa ayaa codsi ka ballaaran yahay wax muraayad, sida ay leedahay faa'iidooyin badan wax galaas.
1. In dhinaca of processing, looxa loo hawl gelin noocyo kale oo badan iyo qaababka badan galaas karo.
2. Waxay yihiin labada jilicsan, wax kastaba ha ahaatee looxa-bedbedel badan leh ka badan hal galaas. Marka galaas, waxaa jaraa burburi af badan oo si fudud u dhaawici dadka; halka looxa jebiyo galay waaweyn, gogo 'af beesho, oo waxba kuma yeeli doonaan dadka. By la barbardhigo laba wax, mid ka mid ah door bidaan wax looxa aan dhib lahayn.
3. Labada ammaanka sare ee fasalka cuntada, xasiloonida kiimikada ah, , adkaysan nabaad guud ee kiimikada, ma L. biyo.
4. Muuqata hoyiyay iftiin ah, , UV ah, , miisaanka waa 1/2 of galaas caadi ah.
5. hoyiyay Light in 92-93% ah, , caag ah oo hufan ee caadiga ah (PS, AS, PVC iwm) ayaa kasoo hoyiyay iftiin badan oo kaliya in yar ka badan 80%.
6. waxqabadka Anti-saameynta waa 12 ~ 18 times of galaas Silicon caadiga ah.
7. xoogga Farsamada iyo dabacsanaanta waa 10 jeer ka badan hal galaas Silicon caadiga ah ah, , qalbi engegnaantooda aawadeed mid ah aluminium ah, , iska caabin ah cimilada u fiican iyo iska caabin gaboobaya.
8. aragti sii fiican u qurux badan ah, , leh gloss crystal-sida ka dib markii qiraan ah, , alias "Queen of caaga Crystal".
Looxa vs PS
Differerence dhexeeya bandhigay looxa iyo PS ku durayaa bandhigay:
1. bandhigay looxa The muuqataa more hufan iyo cute badan PS ku durayaa bandhigay hayayaashii, iyo waxa ay leedahay Heer sare ah ee gloss dusha, leh gloss crystal-sida ka dib markii qiraan ,; waxqabadka wanaagsan daabacaadda ama daahan, haddii la isticmaalo daabacaadda ku haboon ama ku xereen workcraft daahan, waxay ku siin karaan waxyaabaha looxa fiican dadaal decoration dusha & aragti. Sidaa darteed waxaa laga qabanin aragti sii fiican oo qurux badan.
2. looxa leeyahay nolosha qaab aad uga dheer ka PS, ugu yaraan saddex sano dheer ee nolosha adeeg.
3. hayayaashii bandhigay looxa uma baahna in la furo caaryada, sidaas wax lacag caaryada dhici doona, oo ay size iyo qaab-dhismeedka ku haboon laga beddeli karaa waqti walba.
4. Si kastaba ha ahaatee bandhigay looxa waa qiimaha unit badan ka badan PS duraa bandhigay.
5. PS duraa bandhigay hayayaashii waa wax badan ka jaban qiimaha unit, si kastaba ha ahaatee waxa ay u baahan tahay in la furo caaryada bilowgii iyo waxa ay leedahay qiimaha caaryada wixii intaa bixin ah.
6. looxa ayaa endurability xoog badan hoos deegaanka dibadda, waxa uu leeyahay iska caabin ah cimilada u fiican.
7. looxa uu leeyahay qaab anti-UV badan, qaab anti-gabowga.
8. Labada jilicsan, arrinkaas hoos heerkulka hooseeyo.
9. PS uu leeyahay qaab cirbad wanaagsan, ku haboon wax soo saarka leh tiro badan oo. Heerka sii yaraanaya yaryar ee wax soo saarka, size waa mid deggan.
10. PS dib soo-gaadhista hoos qorax, fududahay inuu ka soo leexdo hurdi iyo mugdiga galinaya.
Looxa vs PP
2. looxa leeyahay nolosha qaab aad uga dheer ka PP, ugu yaraan saddex sano dheer ee nolosha adeegga
4. Si kastaba ha ahaatee bandhigay looxa waa qiimaha unit badan ka badan PP duraa bandhigay.
5. PP duraa bandhigay hayayaashii waa wax badan ka jaban qiimaha unit, si kastaba ha ahaatee waxa ay u baahan tahay in la furo caaryada bilowgii iyo waxa ay leedahay qiimaha caaryada wixii intaa bixin ah.
6. PP jilicsan yahay, ma aha sida tii xoog leh oo ay adag tahay sida looxa.
daahfurnaanta 7. PP ee aan barbardhigi karo arylic.
8. looxa ayaa endurability xoog badan hoos deegaanka dibadda, waxa uu leeyahay iska caabin ah cimilada u fiican.
9. looxa uu leeyahay qaab anti-UV badan, qaab anti-gabowga.
Looxa vs PETG
bandhigay looxa uu u muuqdo mid hufan oo cute badan hayayaashii PETG ah, iyo waxa ay leedahay Heer sare ah ee gloss dusha, leh gloss crystal-sida ka dib markii qiraan ,; waxqabadka wanaagsan daabacaadda ama daahan, haddii la isticmaalo daabacaadda ku haboon ama ku xereen workcraft daahan, waxay ku siin karaan waxyaabaha looxa dusha fiican saamayn decoration. Sidaa darteed waxa uu leeyahay aragti laga qabanin & sii fiican oo qurux badan.
PETG ' s waxqabadka anti-saameynta waa 1-3 jeer ee looxa xoogaystay , iyo 3 ~ 10 times of looxa caadiga ah. PETG: Way adag tahay, anti-raadka, iyo endurable, xitaa ka yar deegaanka ee heerkulka ka yar -40 ℃ . Waxyaabaha PETG leeyihiin endurability ku filan fabricatio n, gaadiidka iyo isticmaalka. Waxaa laga yaabaa inay ka fogaadaan jabinta wax ku ool ah.
PETG uu leeyahay qaab ciyaareed la xirrira ka sii wanaagsan, ma cad ka dib markii laabaya hoos heerkulka caadiga ah, ma cad ka dib markii isqaloocinta qabow, crack ma, u fududahay daabacaadda iyo decoration.
PETG waa u fududahay in ay soo saaraan waxyaabaha la dhismeedka adkayn oo dheer iskala.
PETG waa dab u adkaysta, waxa aanu ka tirsan guban, oo aan caawin gubanaya, waafaqsan heerka dhismaha qalab, ma walax halis ah soo saaray ka dib markii gubanaya, more ammaan badan looxa.
Anti-UV, la ballaaran loo isticmaali karaa in signages dibadda ama gudaha, Point of Sale, hayayaashii Display, qalabka dibada, waab iibka, guddiga difaaca ee qalabka, play guddi saldhigga, iibiyo guddi mashiinka iwm
Waa jawi thermoplastic saarka saaxiibtinimo, ma ku jiraan xubno kale oo kiimiko C, H mooyee, O, waa nooc ka mid ah caag ah oo waa mid baaba'aysa. Products ee wax this ka dib markii laga tagay sameeyey, waxay la biyaha iyo carbon dioxide jeedin doonaa, Waxa kale oo loo isticmaali karo oo aan u nijaasayn deegaanka.
PETG waa ka qaalisan looxa, laakiin ka raqiisan yahay PC iyo in ka badan raagaya badan looxa.
PETG waafaqsan Heerka cunto xiriirka ee FDA ah, waxaa lagu saleyn karaa cuntada, alaabta caafimaadka iwm, waxa loo isticmaali karaa sida wax cabayn ama weelasha of kala duwan ee cuntooyinka ...... oo u adkaysta subaga iyo wax badan oo ka mid ah kiimikooyinka, adkaysi u nabaad guurka of acid, xumadoodu iyo saliidaha iwm, waxa la arkaa in ay tahay wax ammaan ah, waayo, cuntada iyo dadka.
PETG ayaa si weyn loo isticmaalaa in dhalooyinka udgoonka iyo dabool in ay, dhalooyin la isku qurxiyo iyo dabool in ay, tuubbooyin lipstics, sanduuqyada la isku qurxiyo, weelasha deodorizer, dhalooyinka budada ilmaha, u saftay eyeliner, iwm iyo waxyaabaha la isku duro PETG: sida diirada, tube eustachian, isku xira ee tuubooyinka , bambooyin, cijiyo, iyo qalabkii dialysis iwm alaabta guriga sida koob, iyo maddiibad salad, saltcellar, Shaker basbaas, kaarka bangiga, weelasha biyaha iwm, taas oo u baahan shuruudo ammaan sare loogu talo galay dadka.
Looxa vs PVC
1. PVC waa jilicsanaayeen, raqiis ah oo sida caadiga ah u khafiif ah.
2. dhumucdiisuna PVC Transparent sida caadiga ah waa in aan ka badnayn 3mm.
daahfurnaanta 3. PVC ee aan barbardhigi karo arylic.
4. PVC ma aha ammaan cuntada, oo aan jawi saaxiibtinimo.
5. PVC sida caadiga ah waxaa loo wada isticmaalo dhismayaasha looxa oo qayb ka ah soo bandhigay.
Looxa vs MDF
Dhulku differerent on dhinac kasta, aragti ah, daahfurnaanta, texture iwm
Looxa vs Wood
Kala duwan oo dhinacyo badan, laakiin inta badan looxa waa keydinta tamarta, deegaanka ilaaliya, si kastaba ha ahaatee qoryo u baahan doontaa in wax la yeelo deegaanka.
Looxa vs biraha Sheet
Khilaaf badanaa u muuqata sida hufnaan, aragti, cimri dherer iyo adayg.
Looxa vs Ceramic
Barbar Dhigo wax dhaqanka dhoobada, looxa ayaa gloss sare laga qabanin, iyo waxa ay leedahay faa'iidooyinka soo socda: dabacsanaan Good, aan si fudud u jabaysa, fududahay in la dayactiro, kaliya isticmaali xumbo jilicsan la yara cadayga, nadiif ah ayaa laga yaabaa caafi inay ahaadaan cusub.
texture jilicsan, ma dareemayaan in qabow ee xilliga qaboobaha.
Bright in midabka, la kulmi karaan raad shaqsiga kala duwan ee nolosha oo tayo leh.
Deegaanka saaxiibtinimo, waa shucaaca ay la mid tahay lafaha dad ah ee.
Waa maxay farqiga u dhexeeya bandhig koo- oo soo bandhigay isku duro?
bandhigay dhegaan uma baahna in la furo caaryada, qaab-dhismeedkoooda iyo qaabeynta laga beddeli karaa waqti kasta oo lacag la'aan dheeraad ah, sidaas oo u badbaadin doonaa tiro aad u badan oo ah kharashka caaryada barbardhigaya kuwa la isku duro, iyo dhegaan bandhigay ayaa ay muuqan aragti wanaagsan barbar la isku duro kuwa. Marka dadku ma doonayo in aan maal kharashka caaryada, ama sheyga ma ku haboon yahay la isku duro, ama dad aadan rabin in ay soo saaraan in badan oo tiro for model ah, ama dadka doonaya in ay isku dayaan in suuqa la design cusub, dhegaan looxa bandhig u noqon doonaa doorashada ugu fiican. waxyaabaha la isku duro waxay u baahan yihiin dadka iibsanaya ay u maal kharashka caaryada ama si wax soo saarka ah ee tirada weyn ah, oo mar furitaanka caaryada, waayo, mid model la bilaabay, waxa aan la bedeli karaa ama beddelay mar dambe. Haddii aad rabtid in aad model kale oo leh design "fiican", waxaad yeelan doontaa in la furo caaryada cusub mar ama door biday in ay ku dhegi been looxa.
Waxaa ku dhegi bandhigay xoog ku filan?
Haa, haddii aadan iyaga tuur ama istaago on, ama isticmaal bandhigay looxa si uu u qabto blocks biraha.
Waa maxay qaababka ugu muhiimsan iyo faa'iidooyinka bandhigay looxa koo-?
bandhigay dhegaan uma baahna in la furo caaryada, qaab-dhismeedkoooda iyo qaabeynta laga beddeli karaa waqti kasta oo lacag la'aan dheeraad ah, sidaas oo u badbaadin doonaa tiro aad u badan oo ah kharashka caaryada barbardhigaya kuwa la isku duro, iyo dhegaan bandhigay ayaa ay muuqan aragti wanaagsan barbar la isku duro kuwa. Marka dadku ma doonayo in aan maal kharashka caaryada, ama sheyga ma ku haboon yahay la isku duro, ama dad aadan rabin in ay soo saaraan in badan oo tiro for model ah, ama dadka doonaya in ay isku dayaan in suuqa la design cusub, dhegaan looxa bandhig u noqon doonaa doorashada ugu fiican.
Maxaa ku saabsan qorshaha horumarka mustaqbalka dhow?
Waxaan horumarin doontaa wax badan oo taxane ah oo qaab looxa (ugu iyaga ka mid ah nidaamka maandooriyayaasha, iyo sidoo kale qalab kale qaar ka mid ah sida MDF, PC, PETG, sheet bir iwm) khadadka kala duwan, sida la isku qurxiyo, dawooyinka &-daryeelka caafimaadka alaabta, e-sigaarka, cabitaanka iyo cabitaanka, Cunidda maalin & maacuunta iwm, isticmaalka ee ugu adeegta, muunad soo bandhigeen, kor u qaadida iibka iwm
Waxaan ka qeyb gali doona Globalshop 2015 ee Las Vegas ee Mareykanka inta lagu jiro Pennslavenia 24-26 th 2015.
Sidee ku saabsan habka workcraft:
Design ama barbaro hanti dhowrka → Qalabka Iibsiga → Laser jarida → axdi qarameedka → nadiifinayo → kulaylka laabaya → Silk daabacaadda shaashadda → bidabeysan → ururinayo → kormeerka → xirxiraan → shixnad
Waa maxay Qalabka ugu weyn?
Laser goynta mashiinka 5
xawaaraha sare ee router 2
Diamond nadiifinayo mashiinka 1
Dunmiiqa axdi qarameedka mashiinka 1
Dusha planer 1
Olol nadiifinayo mashiinka 2
Shaxda arkay 2
Shaxda xardho mashiinka 1
Sax qallajinta foornada 1
Heat isqaloocinta mashiinka 4
Xiinka alxanka mashiinka 1
Iyo in ka badan ......
Ha aad keento qaab kasta oo noocyada caalami ah?
Haa, Loreal, Kaufland, Rimmel, Sally Hanson, Napolean Perdis, K-Mart, Big-W, Watsons, Evergreen iwm
Ma leedahay waaxda QC?
Haa, waxaan leenahay waaxda QC, 3 QC.
Ma idin R & D waaxda?
Haa, waxaan leenahay R & D waaxda, 3 samaynta.
Ha ku siin waxyaabaha ODM?
Haa, waxaan leenahay a alaabta ODM badan. Bil kasta waxaan samayn doonaa ugu yaraan 2-3 waxyaabaha cusub la design cusub.
Fadlan soo dhowaadaan kooxda iibka iyo iyaga si toos ah u weydiiso by email, Skype , or telephones!
Waxay ku siin doonaan degdeg ah iyo xirfad reply!